Iicawa ezili-7 zeSityhilelo - Ziyintoni na?
Iicawa ezisixhenxe zeSityhilelo zimela iCards Cards kumaKristu
Iicawa ezisixhenxe zeZityhilelo zazinjalo, amabandla emzimbeni xa umpostile uJohane ebhala le ncwadi yokugqibela ephazamisayo yeBhayibhile malunga ne-95 AD, kodwa abaphengululi abaninzi bakholelwa ukuba iindinyana zinesibini, intsingiselo efihliweyo.
Iinkcukacha ezimfutshane zibhekiswe kulezi zicawa ezisixhenxe zeSityhilelo:
Nangona la awakungekho kuphela amasonto angamaKristu akhona ngelo xesha, ayesondelene noYohane, ahlakazekile e-Asia Minor kwizinto ezikhoyo namhlanje zaseTurkey.
IiNcwadi ezahlukeneyo, ifomathi efanayo
Inye yale ncwadi iqondiswa "ingelosi" yecawa. Oku kungenzeka ukuba yingelosi yokomoya, umbhishophu okanye umfundisi, okanye icawa ngokwayo. Inxalenye yokuqala iquka inkcazo kaYesu Kristu , ephawulekayo kwaye eyahlukileyo kwicawa nganye.
Inxalenye yesibini yeleta nganye iqala ngo "Ndiyazi," igxininisa intsingiselo kaThixo. UYesu uqhubeka edumisa ibandla ngenxa yokufaneleka okanye ukugxeka ngenxa yeempazamo zalo. Inxalenye yesithathu iqulethe isikhuthazo, imfundiso yokomoya ngendlela ibandla elifanele lilungise ngayo iindlela zalo, okanye ukuncoma ngokuthembeka kwayo.
Inxalenye yesine iphetha isigidimi ngamagama athi, "Lowo unendlebe, makabeva oko uMoya akuthethayo kwibandla." UMoya oyiNgcwele ungubukho bukaKristu eMhlabeni, ngonaphakade kwaye ukholelwa ukuba agcine abalandeli bakhe ngendlela efanelekileyo.
Imiyalezo ecacileyo kwiiCawa ezili-7 zeSityhilelo
Ezinye zee sixhenxe zihlala zifuphi ngakumbi kwiindaba ezilungileyo kunabanye.
UYesu wanika ngamnye umfutshane "ikhadi elibiweyo."
I-Efese "yayishiyile uthando lwayo ekuqaleni," (ISityhilelo 2: 4, ESV ). Baye balahlekelwa uthando lwabo ngoKristu, oluye lwachaphazela uthando abanalo kwabanye.
USmirna wayelumkisa ukuba kwakuza kubakho ukutshutshiswa . UYesu wabakhuthaza ukuba bathembeke ekufeni baze abanike isithsaba sobomi- ubomi obungunaphakade .
IPergamo yaxelelwa ukuba iguquke. Kwaye yawela phantsi inkohliso ebizwa ngokuba yiNikolaitans, abachasayo abafundisa ukuba ekubeni imizimba yabo yayingendawo, kuphela into abayenzayo ngomoya wabo. Oku kukhokelela ekuziphatheni okubi ngokwesondo nokutya ukutya okubingelelwa kwizithixo. UYesu wathi abo banqoba izilingo ezinjalo bafumana " imana efihliweyo" kunye 'nelitye elimhlophe,' iimpawu zeentsikelelo ezikhethekileyo.
UTiyatira wayephethe umprofetikazi oyinyaniso owayekhokelela abantu. UYesu wathembisa ukuzinika (inkwenkwezi yasekuseni) kwabo babemelana neendlela zakhe ezimbi.
ISardesi yayinegama lokuba lifile, okanye lilele. UYesu wabaxelela ukuba bavuke baze baphenduke . Abo babenokwamkela izambatho ezimhlophe, babe negama labo elibhaliweyo kwincwadi yobomi , kwaye babeza kushunyayelwa phambi kukaThixo uYise .
UFiladelphia wanyamezela ngokunyamezela. UYesu wathembisa ukuma nabo kwiimvavanyo ezizayo, enikeza iintlonelo ezikhethekileyo ezulwini, iYerusalem entsha.
ILawodikeya yayinokholo olushushu. Amalungu ayo akhula ngenxa yokubutyebi kwesi sixeko. Kwabo babuyela kwinzondelelo yabo yangaphambili, uYesu wathembisa ukuxelela abanye igunya lakhe.
Ukusetyenziswa KweeCawa Zanamhlanje
Nangona uJohn wabhala ezi zilumkiso malunga neminyaka engama-2 000 edlulileyo, basasebenza kwiicawa zamaKristu namhlanje.
UKristu uhlala intloko yeCawa yehlabathi lonke , ngokunyamekela ngothando.
Iicawa ezininzi zamaKristu zanamhlanje ziye zanyuka kwi nyaniso yeBhayibhile, njengaleyo efundisa iindaba ezilungileyo okanye abangakholelwa kuZiqu zintathu . Abanye baye bathuthuka, amalungu abo ahamba nje ngaphandle kokuthanda uThixo. Iicawa ezininzi e-Asiya naseMpumalanga Mpuma zitshutshiswa. Ukwandiswa ngokuthe xaxa ngamabandla "aqhubekayo" asekela inkolo yabo ngakumbi kwinkcubeko yangoku kunemfundiso efumaneka eBhayibhileni.
Inani elikhulu lamahlelo libonisa ukuba amawaka amabandla asekelwe ngaphantsi kobunkani beenkokheli zabo. Nangona iileta zeZityhilelo zingenasiprofeto esinamandla njengamanye amanqaku aloo ncwadi, bayalumkisa iicawa ezikhuphayo namhlanje ukuba ziya kufikelela abo bangaphendukiyo.
Izilumkiso kumakholwa ngamnye
Kanye njengoko iimvavanyo zeTestamente endala zesizwe sakwaSirayeli zifanekisela ubuhlobo bomntu kunye noThixo , izilumkiso ezisencwadini yeSityhilelo zithetha kubo bonke abalandeli bakaKristu namhlanje. Ezi ncwadi zenza umlinganiselo wokubonakalisa ukuthembeka komntu ngamnye.
AmaNicolaitans ayaphumile, kodwa izigidi zamaKristu zihendwa nguononografi kwi-intanethi. Umprofeti wobuxoki waseTiyatira uye wathatyathwa ngabashumayeli beTV abaphepha ukuthetha ngokufa kukaKristu ngenxa yesono . Amakholwa amaninzi aphendukile ekuthandweni kwabo ngoYesu ukuba asebenzise izinto eziphathekayo .
Njengamaxesha amandulo, ukubuyela emuva kuya kuba yingozi kubantu abakholelwa kuYesu Kristu, kodwa ukufunda ezi ncwadi zincinane kwiicawa ezisixhenxe zisebenza njengesikhumbuzo esingasemva. Kwintlalo igxininiswa nesilingo, ibuyisela umKristu kumyalelo wokuqala . NguThixo oyinyaniso kuphela ofanelekileyo kunqulo lwethu.
> Holman Illustrated Bible Dictionary , uTrent C. Butler, umhleli jikelele
> International Standard Bible Encyclopedia , uJames Orr, umhleli jikelele
> I-Almanac yeBhayibhile , i-JI Packer, uMerrill C. Tenney, uWilliam White Jr., abahleli
Jonga kwii-7 zeZono ezibulalayo
UYesu Wenzani Ngaphambi Kokuza Emhlabeni?
UThixo akaze Ahluleke - Yoshuwa 21:45
I-Annapolis Convention ka-1786
Yintoni uMahl Stick we Painter?
Iprofayile yeZenvo ST1
Ukulinganisela okungafaniyo nokungalingani - IziSeko zoMgaqo-nkqubo zabaQaleli
Imifanekiso yesiFrentshi eneNgcingulu
I-MySQL Tutorial: Yenza iifayile ze-SQL
10 Usuku lukaMnandi lukaValentine kunye neeVideos zoLuntu
Iirhafu zokusetyenziswa kwamanzi kwiScuba Diving - i-SAC Rates, iiRVs, ii-Calculate Easy
Iindlela ezi-5 zokuzisa ii-Instrumental Musical kubantwana abaselula
Imithetho yeTaliban, iMigqaliselo, iMithetho kunye neMimiselo
I-Deictic Expression (Deixis)
I-Aksum yase-Ethiopia - Ulawulo lwe-Iron Age lwase-Afrika kwiCandelo le-Afrika